kuvhuraSUSE Fekitori: nyowani distro rolling kuburitswa | Kubva kuLinux
kuvhuraSUSE Fekitori: nyowani distro rolling kuburitswa
diazepam | | Kugoverwa, GNU / Linux
Izvi zvitsva victorhck anga atoenda kumberi vhiki yapfuura asi ikozvino zvasimbiswa. Fekitori, ruoko rwekuvandudza rwekuvhuraSUSE, ikozvino ichave yekuparadzira kuburitsa kugovera. Shanduko iyi inonzi kupfupisa kugadzikana kwemaitiro ekupedzisira evhuraSUSE.
Iye zvino mapakeji, asati aenda akananga kuFekitori (senguva dzose), achapfuura pre-yekubatanidza bvunzo ine emanyore uye otomatiki ongororo uchishandisa yakavhurikaQA chikuva. Kana vakapasa bvunzo, ivo vaizopinda muFekitori imomo. Ipapo openQA inoshandiswa zvakare kune iyo post-yekubatanidza bvunzo yemapakeji ayo Fekitori uye ipapo yaizopedzisira iri mushanduro dzinowanikwa kune vashandisi.
Saka vhuraSUSE vashandisi, kana iwe uchida kuziva yeFekitori nyowani iyi, unogona kuiisa kurodha pasi mufananidzo.
Oo nenzira, kana iwe ukabvunza nezve Tumbleweed Ini ndinosiya ichi chimwe chinyorwa na victorhck
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Kugoverwa » kuvhuraSUSE Fekitori: nyowani distro rolling kuburitswa
Zvakanaka, izvo zvandiri kushamisika, ndeyekuti macodecs nezvimwe zvinhu zvakaiswa sei mufekitori.
Zvakanaka, ndichafanirwa kuzviedza izvozvi 😀
Kana izvi zvichatsiva Tumbleweed, ndinofunga idanho rekudzokera kumashure, nekuti Fekitori inoita kunge isina kugadzikana. Uye isu tinodzokera kuchinyorwa changu cheDebian: kana chimwe chinhu chikatadza, ivo vanokuudza kuti hauna kugadzikana, ergo vanobvisa bazi iro kugadzikana kwakaedzwa kunze kwevatyairi vemidziyo uye zvimwe zvirongwa zvine ma module mune kernel yechinhu icho chinopa chokwadi zvikanganiso zvakawanda asi izvo zvavasina mhosva nazvo.
Kune rimwe divi, kana kubvisa iro bazi kuri kuzoita kuti idzva shanduro dzakagadzikana dziwedzere kubwinyiswa, zvinoita kunge zvinobudirira kwandiri. Asi zvinondipa kuti izvo hazvisi izvo chinangwa, 🙁.
Fekitori yaivepo Tumbleweed isati yavapo. Kufanana nemiyedzo iyi yauri kutaura nezvayo, yakaitwa kwenguva yakareba, zvinoita sekunge kwandiri, pachokwadi pane nzira yekuve neFekitori isina chero otomatiki bvunzo, asi haina kugadzikana.
Tumbleweed yakagadzirwa kuti ive ne "rolling relese" distro ine yakatsiga fekitori mapakeji, asi haisi kubuda ropa kumucheto, pachinzvimbo Fekitori iri kubuda ropa kumucheto uye ine yakawanda rolling kuburitswa kupfuura Tumbleweed, nekuti haufanire kugadzirisa akawanda mapakeji kana downgrade vamwe pese panoburitswa vhezheni yakagadzikana yeOverSUSE. Asi, Fekitori ine basa rekugadzira iyo nyowani vhezheni yeOpenSUSE, sezvo ichiita sehwaro, asi inogara ichingowirirana neshanduro dzichangoburwa dzemapakeji ese, ini handizive kuti kuburitswa kweshanduro dzeOpenSUSE kwakabata sei fekitori yekuchengetedza, asi ini kuverenga kuti Iyo yaibata zvakafanana neiyo Debian SID repository, iyo inoratidza kuti haisi kunyatso kuburitsa kuburitswa, nekuti nguva zhinji kazhinji pane kuyerera kukuru kwazvo kwekuvandudzwa, panzvimbo pekuvandudza zvishoma nezvishoma iyo Arch-maitiro system.
Ini ndinofungidzira kuti sezvo vachiti izvo zvave kuita Rolling Kuburitswa, vanoreva kuti ichavandudzwa zvishoma nezvishoma seArch uye hazvizovimbe zvakanyanya neshanduro dzinoburitswa OpenSUSE, kunyangwe ichiri hwaro hwadzo.
PS: Ndinoziva zvinoita senge ndiri kutaura kuti Fekitori haigadzirise boka remapakeji pese panobuda itsva yakagadzikana OpenSUSE vhezheni, asi ini ndaida kutaura kuti zvinoita, asi kuti maitiro acho ari nyore uye kune akawanda mashoma mapakeji sezvaanogara Ichiripo fekitori, inongomira zvishoma kana iyo vhezheni nyowani yeOpenSUSE yave kuda kuburitswa, asi kana iyo vhezheni itsva yaburitswa vanototanga kuyedza zvinhu zvakawanda zvitsva, ndosaka Fekitori ichinzi haina kugadzikana, chete inoonekwa seyakagadzikana kana iyo vhezheni nyowani yeOpenSUSE yave pedyo nekuve, sezvavanomira kuyedza zvinhu zvitsva uye vachizvipira kugadzirisa bugs nematambudziko.
Funga kuti Fekitori ndipo panowanikwa vhezheni nyowani yeOpenSUSE, saka nekuda kwechikonzero ichocho pachave nenguva iyo painenge isina kugadzikana (izvo zvingave zvakajairika) uye imwe apo ichaedza kugadzikana (kana yave pedyo kusunungura iyo nyowani yakagadzikana vhezheni yeOpenSUSE). uye kana iyo vhezheni nyowani yabuda, ivo vachatanga kusiyanisa zvishoma nezvishoma zvinoita sekunge kwandiri kana ivo vangangotumira zvakananga yakawanda yakawanda mitsva uye zvinhu zvitsva zvekuyedza.
Nenzira, kana vakanyatsoburitsa kuburitswa, ndinofunga vanoreva kuti Fekitori ichave yakazvimiririra kubva kune dzakagadzikana vhezheni dzeOpenSUSE, iyo ichagara ichigadzirisa uye isingatarise zvakanyanya pakugadzirisa madhiragi chero nguva, asi kuti kana vakagadzirisa bug, vanozviita pazvinogoneka, zvingaite senge arch linux. Saka kuti uwane iyo nyowani vhezheni vhezheni yeOpenSUSE pamwe izvo zvavanoita kubata chando Fekitori mufananidzo uye, kubva pairi, kuvaka nyowani yakagadzikana OpenSUSE.
Chinyorwa chakanaka, ndakafunga nezvekusavimbika kuna Archlinux neiyo chameleon distro asi handina kukwanisa kuiisa, Fekitori ine bhagi risingandibvumidze kuiisa pamakumbo angu (iri Asus; kana mumwe munhu zvikaitika zvakafanana ndiudze ). Ndakaedza kuyedza kubva pane yakagadzika vhezheni asi ini handikwanise kana kupinda mu desktop mushure mekuimisa, handizive kana iri yega pamakumbo angu kana kune mumwe munhu….
Ndatenda neruzivo. Ini ndichafanirwa kuimirira kuti ikure zvishoma zvishoma…. nechinondirova kuti chiri kutenderera. 🙁
unogona kurisvetuka uchishandisa plop
Zano rakanaka kubva OpenSUSE. Neiyi mitsva yekuyedza mapakeji uye ekuvandudza marongero, dambudziko richava kuvepo kweThumbleweed.
Pakupera kwezuva, zvinoita sekunge OpenSUSE iri kutevedzera nzira yekusimudzira yedistro yakafanana neyaDebian.
Kwete kutevedzera, kana kusiri kuvandudza haha.
Ehe, ini ndaifunga kudaro, asi zvine basa rei, sekureba sekugadzikana uye kushanda, zvirinani pane Debian Kuedza haha.
Zvakanaka. Ndiri kushandisa Debian Jessie, uye zvinoita sekunge vakanyatso shandisa SystemD pakupera kwaJuly. Uye bhutsu iri mune snap, kubva pane zvandakashandisa mavhiki mashoma apfuura.
Kwete, ndanga ndine matambudziko mazhinji naDebian Jessie nguva pfupi yadarika, zvirinani ndinamatire neArch inogadziriswa nekubwaira
Ndakaedza kuiisa, asi handina kana kukwanisa kuita usb mhenyu, kunyangwe neiyo dd yekuraira, inondipa iyo udf kukanganisa, ini handizive chii XD, kana iyo tty
Edza rufus http://rufus.akeo.ie/
Paive nebug rakataurwa mubugzilla .. Vakagadzira maisos matsva ayo anofanirwa kushanda: D.
Ini ndinoshamisika kana LXQt inogona kuiswa kuti iite yangu yekumira DE. Ndiri kufarira kuti irikuburitswa-kuburitswa, kunyangwe izvozvi neManjaro ndakanaka 🙂
Tichafanirwa kuzviedza, chii chainditadzisa kubva kuvhuraSUSE kwaive kushomeka kwemapakeji, ndiko kuti, ndinokukoka kuti utarise kuvapo kweEttercap (ncurses vhezheni) uye p0f (passive OS detector), iwe uchaona kuti ikoko zviripo hazvisi zvepamutemo, asi kuvaka system uye hazvishande, saka pakati peiyo uye pandakaiisa ini ndaifanira kuwedzera kanokwana 2 repos yekunze iyo yaipesana neyakavhurika SUSE zvinhu, ndakati ... zvakanaka ... isu zvirinani Ibva pano. Nekuti ndinofanira kutenderera ndichivaka RPM yangu kana pasuru yacho isipo (vazhinji vachandiudza izvozvo) ndinoita sezvazviri, ndichishandisa CentOS neStella uye chii chisiri ini ndinochiunganidza munharaunda ...
Inoda kuziva, inotaridzika zvakanyanya senge Sabayon Linux modhi yekuvandudza (yandinoshandisa):
1. Kuzviisa kwaizove iyo RPM yeiyo yekutanga software, inozove iyo Gentoo ebuilds yeSabayon.
2. otomatiki kudzokororwa kana kusangana kungave kwakaenzana neiyo Sabayon Hell repository.
3. Ongororo yemanyorerwo ingave yakaenzana neiyo Sabayon Limbo repository.
4. Chinja kumahofisi epamutemo (Fekitori) chingave chakaenzana neSabayon Mazuva ese repositi.
5. Kuenda kunzvimbo dzakadzikama dzekuchengetedza kungave kwakaenzana neSabayon Yevhiki nevhiki repository.
Kana iyo modhi ikadzokororwa, OpenSuse inotarisira kudya kwese kugoverwa kweRPM munyika. Nenharaunda iyo OpenSuse inayo, ugh, ichave iri yakatsiga uye yakagadziridzwa kupfuura zvese.
Batisisa pane Fedora!
Woww !!! Ndichaedza * _ *
Ndeupi musiyano uripo pakati pe "Razvino" ISOs uye "snapshot media"? Ini ndoda kuyedza iyo Opensuse Fekitori ndisina kufa kuyedza, ndatenda
Kuva nehukama hwakanaka hakuna kunyanya kushata kuti uenderere mberi neshanduro nyowani dzechinyakare.
Ndiri kuzozviedza, ndiyo yekutanga kuburitsa distro yandinotora 😀